အကောင်းဆုံး J-147 (1146963-51-0) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး J-147 အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ၁၂၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
J-147 (၁၁၄၆၉၆၃-၅၁-၀) Specifications
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 350.341 g / mol
ဓာတုအမည်: 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
နာမ်: N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
InChI Key ကို: HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N ကို
ဘဝတစ်ဝက်: ပလာစမာတွင် ၁.၅ နာရီနှင့် ဦး နှောက်တွင် ၂.၅ နာရီ
ပျော်ဝင်: DMSO တွင် ၁၀၀ mM နှင့် Ethano တွင် ၁၀၀ မီလီမီတာတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်
လျှောက်လွှာ: J-147 အမှုန့်သည်စမ်းသပ်ဆေးသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ကုသမှုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည်။
J-147 (၁၁၄၆၉၆၃-၅၁-၀) NMR Spectrum
J-147 (1146963-51-0) ကဘာလဲ။
J-147 အမှုန့်သည်စမ်းသပ်ဆေးသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ကုသမှုအဖြစ်တီထွင်လျက်ရှိသည်။ ယခုအချိန်အထိကြွက်များတွင်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများသည်ကတိများစွာပြသနေသည်။ J147 သည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါများကိုမောက်စ်မော်ဒယ်လ်များမှပြောင်းပြန်လှန်ရာတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ J147 သည်အခြား Nootropics နှင့် Alzheimer ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ J147 သည် ဦး နှောက်ထဲတွင်ပုံစံသိုက်များကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားသည်။ သုတေသီများကလည်း J147 သည်အခြားဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအိုမင်းခြင်းဆိုင်ရာပြmemoryနာများကိုမှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုသာမကဘဲဖြေရှင်းနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုသတိပြုမိသည်။ ဤဆေးသည်သေးငယ်သောကြွက်များစမ်းသပ်မှုများမှပြသထားသည့်အတိုင်း microvessels မှသွေးယိုစိမ့်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဒီဆေးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကြွက်တွေမှာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်လူကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမတွေ့ရသေးဘူး။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေသောသုတေသနအချို့က J2011 သည်လူ့ ဦး နှောက်အတွင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကောင်းစွာပုံဖော်ထားသည်။ စက္ကူအရမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ပရိုတင်း mitochondria နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Mitochondria ဆဲလ်များသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သူတို့အပေါ်မှာ J147 ၏လုပ်ဆောင်မှုကဆဲလ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်စေသည်။ မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုနောက်ပြန်လှည့်နိုင်ရန်နှင့်ယေဘုယျသိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ဤသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
J-147 (1146963-51-0) အကြိုးခံစားခှငျ့
J147 သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ neurodegenerative ဦး နှောက်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်ကတိများစွာပြခဲ့သည်။ ကြွက်များကိုစမ်းသပ်မှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဤအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
J147 သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆဲလ်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကူညီပေးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားအသက်ကြီးဆဲလ်များထက်ပိုမိုငယ်ရွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်စေသည်။ သို့သော် J147 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလူသားစမ်းသပ်မှုများမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ မျှော်လင့်လိုသည်မှာမကြာမီဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်သော်လည်းရွေးချယ်ထားသောအွန်လိုင်းရောင်းချသူများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအမှုန့်အဖြစ်ရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
J147 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသောဆဲလ်များဖြစ်သော mitochondria နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ J147 ၏လုပ်ဆောင်မှုက mitochondria ဆဲလ်များ၌ oxidative stress ကိုတားဆီးပေးပြီးဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်တမ်းရှည်စေသည်။
J147 သည်ဆဲလ် excitotoxicity ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဆိပ်ဖြစ်စေသော metabolites များ၊ ဆဲလ်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုလွန်ကဲစေခြင်းဖြင့်သေဆုံးသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုလျှော့ချရန်လည်းကူညီသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆဲလ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသစ်နှင့် ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေသည်။ အမှန်မှာ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်သောလမ်းကြောင်းအချို့သည်အသီးယင်ကောင်များကို J147 ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်သူတို့၏သက်တမ်းကို ၉.၅ မှ ၁၂.၈% အထိရှည်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
J147 သည် memory mouse ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် test mouse မော်ဒယ်များအကြားတွင်လည်းကတိများစွာပြခဲ့သည်။ သုတေသနပြုချက်အရဆေးသည်ယခင်စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များတွင်သိသိသာသာသိသိသာသာလျော့နည်းမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပင်ကူညီခဲ့သည်။
သုတေသီများကဤသက်ရောက်မှုများကိုလူ့ဘာသာရပ်များတွင်ပုံတူကူးယူနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ J147 ကို Spatial memory အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကုသမှုအဖြစ်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည့်အထောက်အထားအချို့လည်းရှိသည်။
J147 တွင်ဆဲလ်များအတွင်းဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောအာရုံကြောကာကွယ်သောဂုဏ်သတ္တိများလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သောပျက်စီးခြင်းမှအာရုံခံဆဲလ်များကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ J147 သည် ဦး နှောက်ကြီးထွားမှုအတွက်လည်းအစပျိုးနိုင်သည်။ J147 သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ Synaptic plasticity ကိုတိုးတက်စေပြီးကြီးထွားမှုကို ဦး တည်စေသည်။
J-147 (၁၁၄၆၉၆၃-၅၁-၀) အသုံးပြုမှု?
J-147 ဖြည့်စွက်မှုသည် Spatial နှင့် Long-term memory ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသည်သိမြင်မှုချို့ယွင်းမှုနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားသိမြင်မှုအားနည်းချက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်။ J-147 ကိုရောင်းရန်အတွက်အသင့်အနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူငယ်မျိုးဆက်သည်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြုလုပ်နေသည်။ J-147 anti-aging ဆေးများသည်မှတ်ဥာဏ်၊ အမြင်အာရုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
J-147 သည်အခြေအနေတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းဖြင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူနာများကိုအကျိုးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်ခြင်းသည်ပျော်ဝင်နေသော beta-amyloid (Aβ) အဆင့်ကိုချုံ့ခြင်းဖြင့်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် J-147 curcumin သည်အာရုံခံဆဲလ်ရှင်သန်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုတို့ကိုအာမခံရန် neurotrophin အချက်ပြမှုများကို modulates ။
အေဒီနှင့်အတူလူနာများနည်းပါးလာ neurotrophic အချက်များရှိသည်။ သို့သော် J-147 Alzheimer ၏ဖြည့်စွက်ဆေးကို NGF နှင့် BDNF နှစ်မျိုးလုံးတိုးပွားစေသည်။ ဤရွေ့ကား neurotransmitters မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း, သင်ယူမှုနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကူညီပေးသည်။
J-147 (၁၁၄၆၉၆၃-၅၁-၀) ဆေးတခါသောက်
လေ့လာချက်များအရကြွက်များတွင်အမျိုးမျိုးသောဆေးများကိုသောက်သုံးခဲ့ကြသော်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုကကြွက်များအားတစ်နေ့လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခု, 10, 1 သို့မဟုတ်3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၏ဆေးညွှန်းကိုအသုံးပြု။ ပိုမိုမြင့်မားသောက်သုံးသောပိုကောင်းအလုပ်လုပ်နှင့်အတူထိုး - မှီခိုသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်၊ ၎င်းကိုလူ့သောက်သုံးရန်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏မျက်နှာပြင်ကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးအများဆုံးပြောင်းလဲခြင်းပုံသေနည်းအရ၊ လူနှင့်ညီမျှသောဆေးပမာဏသည်ကြွက်များကိုတစ်နေ့လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၂.၃ နှင့် .12.3 မီလီဂရမ်နှင့်ညီမျှသင့်သည်။
၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျှင် .36 မီလီဂရမ် J147 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင် ၁၀၀ ရှိသည့်လူတစ် ဦး အတွက်တစ်နေ့လျှင် ၃၆ mg၊ ပေါင် ၁၅၀ အတွက် ၅၄ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ပေါင် ၂၀၀ အတွက်လူ ၇၂ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
သို့သော်အခြားလေ့လာမှုများကပင်ဆေးပမာဏနိမ့်ခြင်းမှရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့ပြီး J147 သည် ဦး နှောက်ကိုပစ်မှတ်ထားသည်ဆိုပါကသောက်သုံးမှုသည်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အပြည့်အ ၀ အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအထိကျယ်ပြန့်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့်၎င်းနံပါတ်များကိုအထက်အကန့်အသတ်အဖြစ်ရှုမြင်သင့်ပြီးတစ်နေ့လျှင် ၁၀ မှ ၂၀ မီလီဂရမ်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်လုံလောက်သင့်ကြောင်းယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။
J-147 အမှုန့် ရောင်းမည်(J-147 အမှုန့်ကိုအများအားဖြင့်ဝယ်ယူရန်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် J-147 အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
 “ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုပစ်မှတ်ထားသောစမ်းသပ်ဆေးသည်အိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်” (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) Salk Institute ။ 12 နိုဝင်ဘာလ 2015. နိုဝင်ဘာလ 13, 2015 ရယူရန်။
 ဘရိုင်ယန်အယ်လ်ဝမ် (13 နိုဝင်ဘာ 2015) ။ “ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုပစ်မှတ်ထားသောစမ်းသပ်ဆေးသည်တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးမှုများတွင်အိုမင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။ လာတာ။ နိုဝင်ဘာလ 16, 2015 ရယူရန်။
 ရှောလမုန်သည် B (အောက်တိုဘာလ 2008) ။ “ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသမှုအတွက်အသစ်သောကုထုံးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အချည်မျှင်များဘက်တီးရီးယားကိုကြည့်ပါ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ဂျာနယ်။ 15 (2): 193-8 ။ PMID 18953108 ။